Yeroo Barreessuu, Lakkaawwii ykn Rasaasawwan Uumuu
LibreOffice ufmaan, yammuu barreessitu lakkaawwii ykn Rasaasawwan fayyadama.
Ofmaa Rasaassuu fi Lakkaawwii Dandeessisuuf,
Meeshaalee - Dirqaalawwan OfSirreessaa filadhuutii, caancala Dirqaalawwan cuqaasi, kana booda “Lakkaawwiii fayyadami – mallattoo” fili.
Dirqalii lakkaawwii ofumaa, keewwatawwan warra haalataa keewwataa "Durtii", "Ijbarruu ", "Ijbarruu galumsa" daan dhangeefaman qofaf fayyada.
Yeroo barreessa Tarree Lakkaawwii ykn Rasaasaa umuf
Tattee lakkoofsiifame eegaluuf, 1., i., or I. barreessi. Tarree rasaaseefame eegaluuf, * or - barreessi. Akkasumas, golbee lakkuu mirgaa, bakka tuqaa lakkoofsa boodatti barreessuu nidandeessa, fakkeenyaaf, 1) ykn i).
Iddoo galchi, barruu kee barreessi, booda galchi dhiibi. Kewwaatan haaraa ufmaan lakkoofsa itti aanu ykn rasaasaa fudhata
Tarree xumuruf ammas galchi dhiibi
Lakkoofsa kamuu tarree lakkoofsan eegalu dandeessa
Dhangi'i - Rasaasawwanii fi Lakkaawwii
Title is: Yeroo Barreessuu, Lakkaawwii ykn Rasaasawwan Uumuu